Aqoon Kororsi: Waa Maxay Hub iyo Router Farqiga u dhaxeeyo? | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Aqoon Kororsi: Waa Maxay Hub iyo Router Farqiga u dhaxeeyo?
Aug 5, 2015 - 2 Jawaabood
Hub iyo Router labadduba waa Qalab Electronic ah waxaana lo isticmaalahaa nidaamyada isku ixrka (Networking Systems). Qalabka Router-ku waa midaad u hormarsan wuxuuna leeyaha Qalab iyo Software kaasoo loo isticmaalo in lagu xariiriyo Networking Balaran sida LAN iyo WAN.
Qeexitaan: Waa qalabka electronic ah oo koronto ku shaqeeyo kaaso isku xiraayo network-yo badan si eey xogta isu weeydaarsadaan.
Nidaamka uu isticmaalo: Electrical signal ama bits.
Shaqada: Waxaa loo isticmaalaa inuu isku xiro network kombiyuutaro ka dhexeeyo.
Networking-ka loo isticmaalo: LAN
Ma internet ayuu u baahanyahay: Maya
Qeexitaan: Waa Qalab loo isticmaalo networking ama isku xirka kaasoo ku xiraayo laba network oo ha meel ama hal masaaxo kala yaalo.
Ports (Godadka): 2/4/8 god
Nidaamka uu isticmaalo: Packet
Shaqada: Qalbka router-ka xogta si toos ah aye u soo dhax martaa kadib Computer-ka looga baahnaa xogtaas.
Shax: Qalabka Router-ka wuxuu leeyahay meel uu ku keeydiyo IP address-ka or Mac Address.
Qaabka data(xog) gudbinta: Full Duplex oo ah in laba dhinac uu xog kala siin karo tusaale haduu xog Computer A u gubinaayo misana Computer B uu xog soo dalbado xog-ti ayuu u diarayaa oo masugaayo mida hada socoto.
Networking-ka loo isticmaalo: LAN, WAN
Ma internet ayuu u baahanyahay: maya laakiin internet-ku wuxuu kuu ogolaanayaa in dad badan ku soo xirmaan sidookale waxaa kordhaayo amniga network-ga (Security Network).